Ammaanka Kenya oo la adkeeyay - BBC Somali - Warar
Ammaanka Kenya oo la adkeeyay
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 31 Maarso, 2013, 09:54 GMT 12:54 SGA
Maxkamada sare ee Kenya ayaa go'aan ku gaartay in Uhuru Kenyatta uu yahay madaxweynaha ku guulaystay doorashada.
Boliiska Kenya ayaa adkeeyay ammaanka, kadib markii maxkamada sare ay go'aan ku gaartay in Uhuru Kenyatta uu ku guulaystay doorashada madaxweynenimada.
Rabshado dhacay markii ay maxkamada gaartay go'aanka ayaa waxaa ku dhintay laba qof, dhowr kalena waa ay ku dhaawacmeen magaalada Kisumu oo ah meel uu taageero badan ku leeyahay Raila Odinga oo laga guulaystay doorashada.
Boliiska ayaa sheegay in xaalada Kisumu la xakameeyay. Mr Odinga ayaa sheegay inuu qadariyay go'aanka maxkamada, laakiin uu eegayo si kale oo ammaan ah oo uu ku xaliyo muranka. Wuxuu ugu baaqay taageerayaashiisa inay iska ilaaliyaan dagaal.